Top 10 Qalabka Kaydinta App Store Si Loogu Hormariyo Barnaamijkaaga Kala Duwan ee Barnaamiyada Caan Ah | Martech Zone
Jimco, Abriil 2, 2021 Jimco, Abriil 2, 2021 Douglas Karr
Iyada oo ka weyn 2.87 milyan oo codsi waxaa laga heli karaa Android Play Store iyo in ka badan 1.96 milyan oo codsi ah oo laga heli karo iOS App Store, buunbuunin mayno haddii aan dhahno suuqa barnaamijka ayaa sii kordheysa. Caqli ahaan, barnaamijkaagu lama tartamayo barnaamij kale oo ka socda tartamaaga isku niche laakiin wuxuu la socdaa barnaamijyo ka kala socda qaybaha suuqyada iyo niches.
Haddii aad u malaynayso, waxaad u baahan tahay laba walx si aad uga dhigto isticmaaleyaashaadu inay ku sii hayaan barnaamijyadaada - dareenkooda iyo booska ay ku kaydiyaan. Iyadoo suuqa ay ku badan yihiin barnaamijyada noocyadu kala duwan yihiin, waxaan u baahanahay wax ka baxsan app finesse aaladaha horumarinta aaladaha iyo farsamooyinka si loo hubiyo in barnaamijyadeenna la aqoonsado, loo soo dejiyo loona isticmaalo dhagaystayaasheena loogu talagalay.
Taasi waa dhab ahaan sababta ay u fiicnaanta barnaamijyadu u noqdaan lama huraan. Si la mid ah hagaajinta mashiinka raadinta, halkaasoo xeeladaha, qalabka, habraacyada, iyo farsamooyinka la geeyo si loo sameeyo degel ama degel ka muuqda bogga koowaad ee natiijooyinka raadinta, Kordhinta App Store (ASO) wuxuu ka dhigayaa abku inuu ka muuqdo korka natiijooyinka raadinta ee dukaamada barnaamijka.
Waa maxay isku-hagaajinta App Store? (ASO)
ASO waa iskudhaf istiraatiijiyad, qalab, habraacyo, iyo farsamooyin la geeyay si ay uga caawiyaan barnaamijkaaga mobilada inuu sifiican u qiimeeyo oo uu ula socdo qiimeyntiisa gudaha natiijooyinka raadinta App Store.
Mid ka mid ah sababaha ugu waawayn ee ugu habboon ee keydinta keydka abku u tahay lama huraan waa mid u dhow 70% isticmaalayaasha on dukaamada app isticmaalaan xulashada raadinta si ay u raadiyaan barnaamijyadooda ay doorbidaan ama xalka app-ku-saleysan. Iyadoo 65% natiijooyinka raadinta la beddelayo, barnaamijkaaga hubaal wuxuu u baahan yahay inuu dusha sare ahaado haddii aad raadineyso inaad kasbato isticmaaleyaal badan, maalgeliso, u xuubsiibato astaan, iyo inbadan samee.
Si lagaaga caawiyo inaad ku guuleysato kuwan, waxaan halkaan u nimid astaamaynta dukaamaysiga wax lagu qoro ee gaarka loo leeyahay, faa'iidooyinkiisa iyo 10 waa inay lahaadaan qalab. Marka, haddii aad tahay horumariyaha barnaamijka, shirkadda horumarinta barnaamijka ama shirkad ASO ah, qoritaankani wuxuu kuu iftiimin doonaa qaar ka mid ah aaladaha wax ka qabashada dukaanka.
Aynu bilowno laakiin intaa ka hor, halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah faa'iidooyinka degdegga ah ee ku habboonaanta dukaanka app.
Faa'iidooyinka App Store Optimization
Mid ka mid ah faa'iidooyinka aasaasiga ah ee isticmaalka qalabka ASO iyo farsamooyinka ayaa ah inaad hagaajiso muuqaalka barnaamijkaaga dukaanka barnaamijka. Wax kasta oo ka sarreeya natiijooyinka raadinta waxaa loo arkaa mid lagu kalsoonaan karo markii loo eego. Marka taa laga reebo, is-hagaajinta dukaanka barnaamijka ayaa ku siinaya faa'iidooyinka soo socda:
Adoo hagaajinaya joogitaanka App Store iyo hagaajinta darajadaada, ASO:
Diraya rakibid dheeri ah barnaamijkaaga moobiilka.
Kuu suurtogelineysa inaad waddo dakhli badan oo abka ah.
Waxay yareyneysaa kharashka ku baxa helitaanka isticmaaleyaasha barnaamijka cusub.
Waxay hagaajineysaa wacyiga sumadda, xitaa haddii aysan rakibin markii ugu horreysay.
Waxay wadataa la wareegida adeegsadayaasha ku habboon ee tayada sare leh kuwaas oo ka faa'iideysan doona barnaamijyadaada awood buuxda. Isticmaalayaasha noocan oo kale ah waxay sidoo kale u badan tahay inay isticmaalaan astaamahaaga caymiska, moodooyinka rukunka iyo waxyaabo kale oo badan.
Qalabka ASO ee ugu caansan si loo hagaajiyo qiimeynta barnaamijka
Aragtida guud ee suuqa waa waxa aad u baahan tahay si aad barnaamijkaaga u gaarsiiso meesha ugu sarreysa ee natiijooyinka raadinta iyo app Annie taas uun buu sameeyaa. Iyada oo ay u badan tahay keydka ugu weyn, App Annie wuxuu ku siinayaa aragtiyo ballaaran oo ku saabsan doorbidista suuqa, tartamayaashaada, barnaamijyo isku mid ah iyo inbadan.
Tirakoobka isticmaalka App iyo warbixinnada
Soo dejiso tirakoobka
Raadinta dukaanka abka-waqtiga dhabta ah oo leh aragti ku saabsan jaantusyada sare, faahfaahinta abka, taariikhda darajada iyo inbadan
Qaybta ugu wanaagsan ee ku saabsan App Annie ayaa ah inaysan bixinayn rukhsad guud ama moodel qiimeyn ah. Isticmaalayaasha waxay helayaan xigashooyin habeysan oo ku saleysan baahidooda.
Mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee cilmi baarista, Sensor Tower waxay ku siineysaa aragti ku saabsan qaar ka mid ah ereyada muhiimka ah ee tartamayaashaadu isticmaalayaan laakiin waad ka maqantahay. Waxay kaa caawinaysaa inaad hanjabaadaha u beddesho fursado isla markaana aad musbaar ka dhigto joogitaanka barnaamijkaaga ee dukaamada.
Qorsheeyaha ereyga muhiimka ah, cilmibaare iyo qalab hagaajinta
Raadinta isticmaalka App
Tarjumida erayga iyo inbadan
Sensor Tower waxay ku bixisaa kala duwanaanta qiimaheeda 3 qiimeyn ganacsi iyo 2 baakado ganacsi oo yar-yar. Iyada oo qiimaha laga bilaabo $ 79 bishii illaa xigashooyin la gaari karo oo horumarsan, dadka isticmaala ayaa habeyn kara astaamahooda waxayna ku bixin karaan si waafaqsan.
Loogu talagalay waayo-aragnimo weyn, ka Tilmaamaha barnaamijka waxay bixisaa warbixinno ballaaran iyo astaamo deegaan. Iyada oo warbixinnada laga helayo in ka badan 60 waddan oo lagu cabbirayo qiyaaso kala duwan, tani waa aalad u adeegsiga astaamaha. Si kastaba ha noqotee, barnaamijka waxaa loo heli karaa oo keliya dadka isticmaala macruufka.
La socodka keyword
Qiyaasaha dakhliga iyo inbadan
Tijaabo bilaash ah oo 7 maalmood ah ayaa waxaa bixiya App Tweak oo loogu talagalay isticmaaleyaasha cusub si ay ula qabsadaan barnaamijka una sahamiyaan awooddooda. Markay taasi dhammaato, waxay dooran karaan qorshe bilow ah ($ 69 bishii) ama waxay doortaan qorshaha Guru ama Power ee $ 299 iyo $ 599 bishiiba siday u kala horreeyaan.
Sirdoonka guurguura waa USP ee Apptopia, taas oo u oggolaanaysa horumarinta barnaamijyada iyo milkiilayaasha meheradaha inay ka helaan aragtiyo hawl iyo hawl muhiim ah miisaanka moobiilka ee wax soo saarka, iibka, istaraatiijiyadaha dakhliga, isticmaalka, iyo inbadan si loo sameeyo go'aanno xog-wadeen ah.
Tilmaamayaasha waxqabadka muhiimka ah
Qalabka baaritaanka suuqa
Saadaal ama qiyaas isbeddelada macaamiisha
Adeegsiga App ee shirkadaha dadweynaha iyo inbadan
Qiimaha abku wuxuu ka bilaabmayaa $ 50 bishii, halkaasoo ilaa 5 barnaamij ay ganacsiyada ku isticmaali karaan.
Dad badan ayaa jecel, ka ficil guurguura barnaamijku wuxuu bixiyaa waxyaabo kala duwan oo u gaar ah oo lagu soo bandhigay UI aad u fiican. Astaamaha istaagga ee barnaamijku waa awooddiisa lagu qiyaaso waxqabadka barnaamijka eray gaar ah.
Xogta soo dejiso
Raadinta ereyga muhiimka ah
Tilmaamaha ereyga tartame
Warbixinno horumarsan iyo kuwo kale
Si la mid ah App Tweak, isticmaaleyaashu waxay helayaan tijaabo bilaash ah oo 7-maalmood ah ka dib markay is-qortaan. Ku dhaji tan, waxay bixin karaan $ 69, $ 599 ama $ 499 bishiiba bilowga, guuleystaha iyo qorshooyinka Premium siday u kala horreeyaan.
Kuwa idinka mid ah ee raadinaya inaad si dabiici ah u kobcisaan darajada iyo aragtida barnaamijkaaga, Isboorti waa aaladda ASO ee kuugu habboon. Waxay bixisaa aragtiyo faahfaahsan oo ku saabsan adeegsiga barnaamijkaaga oo ay ku jiraan inta ay isticmaaleyaashaadu ka daawanayaan fiidyowyada ku jira barnaamijka iyo xayeysiinta xayeysiinta ah si ay kaaga caawiyaan inaad si fiican u fahamto macaamiishaada.
Ilaa 30 goobood oo taabasho kala duwan ah si loo baadho oo aragti looga helo
A / B imtixaanka
Tilmaamaha Splitmetrics ee halyeeyada guryaha
Tijaabinta horay loo sii daayo ee barnaamijyada
Imtixaanka waxqabadka ee ka dhanka ah tartamayaashaada iyo inbadan
Qalabku wuxuu kaa doonayaa inaad qaadato demo ka dibna aad hesho xigashooyin shaqsiyeed oo ku saleysan baahiyahaaga.
Haddii ahmiyadaada koowaad ay tahay sidii si habsami ah loogu heli lahaa isticmaaleyaasha barnaamijkaaga, Codso waa aaladda ugufiican ee ugu habboon ee raadinta barnaamijka aad heli laheyd. Soosaarayaasha aaladda waxay sheeganayaan in barnaamijkaaga uu heli karo koror 490% ah oo lagu rakibo qalabka korontada ku shaqeeya iyo 5X oo koror ku soo kordha toddobaadlaha soobaxa dukaamada barnaamijka.
Abka, waxaad kula socon kartaa qaar ka mid ah cabbiraadaha waxqabadka ugu muhiimsan sida isbeddelada booska ereyga, sicirka beddelka, soo degsashada iyo hubi istiraatiijiyado ku-habboonaynta barnaamijka tartamayaashaada si aad adiguba wax uga beddelo Waxaad sidoo kale ku habeyn kartaa barnaamijkaaga astaamaha tarjumaadda ereyga ee aaladda ay bixiso.
Tusmada Waxqabadka ee dukaamada
Otomaatigga baaritaanka erayga muhiimka ah
Falanqaynta tartame iyo dulmar guud
Digniinta ASO ee loo diro emaylka iyo Slack
Astaamo u gaar ah heerarka beddelaadda iyo wax ka badan
Shirkadaha, qiimayaashu waxay ka bilowdaan $ 55 bishii ilaa $ 111 bishii iyo qorshooyin qiimeyn loogu talagalay daabacadaha shirkadaha.
Haddii Splitmetrics ay ku saabsanayd kor u qaadista aragtida dabiiciga, Bakhaarka waxay ku saabsan tahay wanaajinta sicirka beddelka. Adoo adeegsanaya qaab cilmiyeysan oo xog ku saleysan qiimeynta dhaqanka macaamiisha, waxay ku siineysaa tanno tijaabooyin ah, tijaabooyin iyo qalab qiimeyn iyo farsamooyin si loo hubiyo in martidaadu u beddelaan isticmaaleyaasha.
StoreMaven xitaa waxay wadaagtaa tirakoobyo in hirgelinteedu ay keentay 24% koror ah heerarka beddelashada, 57% hoos u dhaca ku soo iibsashada isticmaaleha iyo ku dhowaad 34% kobcinta hawlgelinta.
Imtixaanka A / B
Istaraatijiyadaha istiraatiijiyadeed ee gaarka ah
Tijaabinta mala-awaalka iyo falanqaynta natiijooyinka
Cilmi baarista tartanka iyo inbadan
StoreMaven waxay kaa rabtaa inaad qaadato demo ka dibna aad hesho xigashooyin shaqsiyeed oo ku saleysan baahiyahaaga.
Rabitaan waxaa loogu talagalay in lagu soo koobo farqiga u dhexeeya kaqeybgalka barnaamijka iyo fahamka dhaqanka isticmaalaha. Waxaa lagu dhisay fikradda aasaasiga ah ee ah in barnaamijyada barnaamijyada iyo shirkaduhu aysan helin marin u habboon oo ku saabsan jawaab celinta isticmaalaha iyo cabbiraadda hawlgelinta si loogu hagaajiyo barnaamijyadooda waxqabadka iyo muuqaalka. Apptentive wuxuu halkan u joogaa inuu wax uun isu keeno.
Helitaanka jawaab celinta-waqtiga dhabta ah
Falanqee caafimaadka barnaamijka, fikradaha macmiilka iyo inbadan
Bartilmaameedka saxda ah iyo cabirka waxqabadka iyo inbadan
ASOdesk wuxuu ku siinayaa aragti guud oo ku saabsan weydiimaha isticmaaleyaashaada iyo bartilmaameedyada dhagaystayaasha ay adeegsadaan si ay u gaaraan barnaamijyo la mid ah kuwaaga ku jira suuqa. Ka sokow, waxay kaloo kuu sheegeysaa ereyada muhiimka ah ee barnaamijyada tartamayaashu ay ku kala sarreeyaan iyo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan ereyada muhiimka ah ee tartanka yar. Ugu dambeyntiina, barnaamijku wuxuu sidoo kale ku siinayaa macluumaad muhiim ah oo ku saabsan waxqabadka xeeladahaaga ASO.
Falanqaynta erayga, cilmi-baare iyo sahmiye
Warbixinta iyo tirakoobka
Jawaab celin iyo dib u eegis kormeer
Falanqaynta ereyada furaha tartanka iyo waxyaabo kale oo badan
Waxaa jira laba qorshe oo qiimayn ah - mid bilowga ah iyo ganacsiyada yaryar iyo midka kale ee shirkadaha iyo shirkadaha. Qiimaha bilowgu wuxuu ka bilaabmayaa $ 24 bishii wuxuuna tagaa ilaa $ 118. Shirkadaha, dhanka kale, qiimayaashu waxay ka bilowdaan $ 126 bishii illaa $ 416 bishii.
Marka, kuwani waxay ahaayeen aaladaha ugu caansan uguna waxtarka badan si loo wanaajiyo aragtida barnaamijkaaga dukaamada barnaamijka. Qalabka aad gacanta ku haysato, waxaad u baneyn kartaa muuqaalka muuqaalka dabiiciga ah, helitaanka isticmaalaha oo kordha, hoos u dhaca qiimaha-ku-hogaaminta, iyo inbadan. Hadda, waad isticmaali kartaa aaladaha isla mar ahaantaana waad ka shaqeyn kartaa hagaajinta waxqabadka barnaamijkaaga shaqadiisa sidoo kale. Haddii aad sahamineyso talooyin kale si aad suuq ugu sameyso barnaamijkaaga moobiilka ka dib halkan waa hagaha oo dhameystiran:
Tilmaamo Si Loo Suuq Geeyo App-kaaga Mobilada
Tags: app iyo appbarnaamijka anniedukaanka apphagaajinta dukaanka appdarajada dukaanka appisbadal barnaamijkaraacidtufaax appdukaan tufaax ahdigtooni lehapptopiaasoasodeskgoogledukaanka google playsida loo suuq geeyo barnaamijkaaga mobiladamacruufkamacruufka appficil guurguurasuuqgeynta barnaamijka mobiladadukaanka moobaylkakala sarreynta App Store moobiilkamunaarad shidmaqaybindukaanka